Cristiano Ronaldo waa inuu 4-gool ku dhaliyo inta Sanadka ka harsan haddii kale………… – Gool FM
Cristiano Ronaldo waa inuu 4-gool ku dhaliyo inta Sanadka ka harsan haddii kale…………
(Europe) 21 Dis 2018. Cristiano Ronaldo ayaa looga fadhiyaa inuu saddexda kulan ee soo socota ku dhaliyo 4-gool haddii kale waxaa soo afjarmi doonta sheekadiisii taxanaha soo ahayd Todobadii sano ee la soo dhaafay.
Xiddigii hore ee Real Madrid ayaa sanadkasta 50-gool amaba ka badan u dhalinayay kooxdiisa iyo dalkiisa tan iyo 2011-kii.
Hase ahaatee Ronaldo ayaa sanadka 2018, 46-gool u dhaliyay Real Madrid, Juventus iyo xulkiisa Portugal taa oo ka dhigan inuu u baahan yahay afar gool sanadka intuusan dhammaan.
Si ay midaa ugu hirgasho oo uusan hoos uga dhicin Rikoodhkiisa todobada sano soo socday waa inuu afar gool dhaliyaa saddexda kulan ee soo socota ay Juve la ciyaari doonto Roma, Atalanta iyo Sampdoria.
Arag Safka ay Liverpool Caawa ku soo gali karto kulanka Wolverhampton...(Imise Saac ayaa la daawanayaa)